တတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်း… – PVTV Myanmar
တတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်း…
·7months ago ·31 Comments
တတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်း
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၂/၂၀၂၁) ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့ သတင်းတွေကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၂၂-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ ထုတ်လွှင့်မှုကဏ္ဍများ
Like – 6.7K Share – 477
“တော်လှန်ရေးမှသည် တရားမျှတမှုဆီသို့ စကားဝိုင်း”
Citizen Detective & Blood Money ( Episode -2- )
Ko Than Tun says:
2021-06-30 at 7:19 PM
Aung Hlaing says:
2021-06-30 at 7:24 PM
Soe Win Maung says:
2021-06-30 at 7:26 PM
NUG/CRPH အောင်မြင်ပါစေ ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ
မြတ် သူ says:
2021-06-30 at 7:30 PM
Zaw Thu Kha says:
NUG. CRPH အောင်ရမည်
Ma Kyi says:
2021-06-30 at 7:34 PM
2021-06-30 at 7:43 PM
We stand together CRPH and NUG trustfully.we trust and accept CRPH and NUG.We stand together CRPH andNUG trustfully
we trust and accept CRPH and NUG
Our government is only NUG.Our government is only NUG.Our government is only NUG.Our government is only NUG.
CDM is so strong 💣 for $Ming Aung Hlaing and so thank and Respect to everyone in CDM.All of you are our heroes and plz keep this.
May be healthy our leaders,plz
2021-06-30 at 7:44 PM
absolutely must be successful our federal democracy path.
Zaw Myint Tun says:
2021-06-30 at 7:47 PM
အောင်မြင်ပါစေ NUG . CRPH
2021-06-30 at 7:56 PM
တည် စေ မင်း says:
2021-06-30 at 8:02 PM
NUG အစိုးရအနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်ကို အရင်ပိုင်နက်နယ်မြေအဖြစ် ကြိုးစားရယူစေချင်ပါတယ်၊ ပြီးကရင်၊ ကချင်နယ်တွေပါပေါ့။ ကုန်းပိတ်ဒေသတွေချည်းပဲလည်း စစ်မျက်နှာမဖွင့်နိုင်သလို အခြားရေလမ်း၊ လေကြောင်း စစ်မျက်နှာဖွင့်တိုက်ခိုက်နိုင်မည့် ဒေသတွေကို ဦးစားပေးပြီး ပိုင်နက်နယ်မြေအဖြစ် သိမ်းပိုက်စေချင်ပါတယ်။ ဥပမာ ရန်ကုန်နဲ့ ဧရာဝတီလို နေရာတွေပေါ့။ ပိုင်နက်နယ်မြေရှိပါက NUG အစိုးရအနေဖြင့်ပို၍စီမံခန့်ခွဲလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကမ္ဘာကပိုအသိအမှတ်ပြုလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အောင်မြင်ပါစေ။
Nan Cool says:
2021-06-30 at 8:04 PM
Pankalay Pankalay says:
2021-06-30 at 8:30 PM
အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသူ says:
2021-06-30 at 8:35 PM
CRPH/NUG ပြည်သူ့အစိုးရကိုအပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ် #NUGပြည်သူ့အစိုးရ_အောင်မြင်ပါစေ
Musa Alarmi says:
2021-06-30 at 8:50 PM
2021-06-30 at 8:54 PM
Myo Zaw says:
2021-06-30 at 9:02 PM
U Than Hlaing says:
2021-06-30 at 9:22 PM
Thurain Min Thakin says:
2021-06-30 at 9:25 PM
Pha Wail says:
2021-06-30 at 9:29 PM
NUG လူကြီးမင်းများ ကျမ်းမာ ရွှင်လန်း၍ တိုင်းပြည်၏ အကျိုး
2021-06-30 at 9:31 PM
NUG လူကြီးမင်းများ ကျမ်းမာ ဘေးင်းကြပါစေ
2021-06-30 at 10:06 PM
2021-07-01 at 10:14 AM
2021-07-01 at 11:16 AM
2021-07-01 at 11:59 AM
သံတရာ ခရီးသြား ဧသညိ့ says:
2021-07-01 at 12:41 PM
ခ်စ္သမီးကေလး ခ်စ္သမီးကေလး says:
2021-07-02 at 7:38 AM
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလက်ရှိဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော COVID-19 တတိယလှိုင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး…